Ny paositry ny polisy belza dia nikasa ny hanafika ny masoivoho amerikana any Bruxelles
Home » Lahatsoratra farany farany » Crime » Ny paositry ny polisy belza dia nikasa ny hanafika ny masoivoho amerikana any Bruxelles
Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Nosamborin'ny polisy tany Bruxelles ny lehilahy iray ahiahiana ho nikasa hanafika ny masoivohon'i Etazonia tao an-drenivohitra Belgian and Union Union Europe, hoy ny fampanoavana.
Tsy dia fantatra loatra ny momba ilay olona ahiahiana, izay vao nosoratany tamin'ny sora-tànany, MG. Nosamborina izy tamin'ny sabotsy ary voampanga tamin'ny alatsinainy ho “andrana fanafihana tao anaty tontolon'ny mpampihorohoro ary nanomana fanafihana mpampihorohoro.”
Nilaza ny mpampanoa lalàna fa manana “famantarana marimaritra iraisana” izy ireo izay naharesy lahatra azy ireo fa nikasa hanafika izy ireo. Ilay lehilahy mihitsy no nandà izany fiampangana izany. Nilaza ny mpampanoa lalàna fa tsy hisy intsony ny pitsopitsony havoaka, amin'ny fitanisana ny filàna fiarovana ny fanadihadiana.
Mandritra izany fotoana izany, nilaza ny fampielezam-baovaom-panjakana belarosiana RTBF fa efa nojeren'ny polisy nandritra ny fotoana fohy ny olona ary vao tsy ela akory dia nahita olona niahiahy teo akaikin'ny masoivohon'i Etazonia.
Nahita firongatry ny asa fampihorohoroana i Belzika tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ny fanafihana malaza indrindra dia nitranga tany Bruxelles tamin'ny taona 2016, raha andiana baomba namono tena nandrindra olona 32 no namoy ny ainy ary 300 no naratra. Tamin'ny volana aogositra 2017, voalaza fa nanokatra tranga mpampihorohoro 189 ny manampahefana belza hatramin'ny nanombohan'io taona io fotsiny.
Ny miaramila belza sy ny tompon'andraikitra mpampihatra lalàna koa dia nokendren'ny mpampihorohoro hatrany. Tamin'ny taona 2017 dia nanafika andiana miaramila tany Bruxelles ny lehilahy iray nitondra antsy, ary roa no naratra. Herintaona taty aoriana, nisy mpanafika iray hafa namono polisy roa sy olona nijanona teo amin'ny tanànan'i Liege Belzika. Ny fanjakana Silamo no tompon'andraikitra amin'ireo fanafihana roa ireo.